Wati wamboda kuve neyako wega paki yekuvaraidza?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Resorts » Wati wamboda kuve neyako wega paki yekuvaraidza?
Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • nhau • Resorts • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Wati wamboda here kuva neyako pari yekuvaraidza?
Paki inozotengeswa yose kana kuti ichatengeswa seivhu, zvishandiso, kukwira, zvivakwa uye rezinesi redoro zvidimbu
Clementon Park muClementon, New Jersey iri kutengeswa kukisheni
Yakavambwa seimwe yemapaki erudzi, yakavakwa pakupera kwetiroli mutsara kukurudzira kukwikwidza mukati mevhiki
Iyo paki yakavharwa kubva munaGunyana 2019
Kana iwe wakamboda kuve neyako pari yekuvaraidza, paki yemvura uye yakavanzika nyanza, ikozvino ndiwo mukana wako!
Clementon Park. Sekureva kweMutungamiri weCRG, Bill Firestone, paki inozotengeswa yose kana kuti ichatengeswa seivhu, midziyo, kutasva, zvivakwa uye rezinesi redoro muzvidimbu.
"Tiri kutsvaga mubatsiri wepaki ino inoyevedza iri kunze kwePhiladelphia uye tinotarisira kufarira kukuru kune iyo auction," akadaro Firestone. "Imba iyi inosanganisira dhamu remahekita makumi maviri neshanu, dhamu, kutasva mafaro, paki yemvura uye rezinesi rakazara redoro."
Yakavambwa seimwe yemapaki erudzi, yakavakwa panoperera njanji yetroli kukurudzira kukwikwidza mukati mevhiki uye kupa zvivaraidzo kuvagari vePhiladelphia iri pedyo. Yakagadzwa naTheodore Gibbs nevanakomana vake vaviri, yaive yemhuri kusvika muna 2011 payakatengwa neboka rekudyara Premier Parks, uyo akabva aripa zita rekuti Clementon Park uye Splash World mukucherechedza kuwedzerwa kwepaki yemvura
Iyo paki yakavharwa kubva munaGunyana 2019. Mutongi anonzi Howard Samuels uye Rally Capital Advisors seanogamuchira muna Ndira 25, 2021. Samuels akabhadhara CRG kutengesa paki, kungave seyuniti imwechete kana zvidimbu. Mabhidi achatorwa munaKurume 23, 2021, nekutariswa kunowanikwa munaKurume 19.
Minister Bartlett: Jamaica iri kusangana nekukura kukuru kwehotera mune chero gore rimwe chete January 24, 2022